I-Sony Releases Limited Edition Translucent PS4 Yokugubha Isigidi esingu-500 se-PlayStation Kuthengisiwe | Izindaba zamagajethi
I-Sony Releases Limited Edition Translucent PS4 Yokugubha I-PlayStation Edayiswayo Engu-500 Million
Kusukela isizukulwane sokuqala se-PlayStation sakwaSony sifike emakethe, le divayisi isibe unyaka nonyaka, kukhonsoli ethengiswa kakhulu kunazo zonke emhlabeni. Yize kuyiqiniso ukuthi selokhu yethulwa, bobabili iNintendo neMicrosoft sebethule amamodeli ahlukahlukene emakethe, inkampani yaseJapan iyaqhubeka nokubusa emhlabeni wamageyimu evidiyo sengathi ayinayo imbangi.
Ngokuvamile, abakhiqizi abakhulu baqala izinhlelo ezikhethekile zokududuza kwabo ukugubha uhlobo oluthile lomcimbi ohlobene nomdlalo we-movie noma wevidiyo. Lolu hlobo lokududuza aluvamile ukuba noludonsa olukhethekile phakathi kwabasebenzisi abahlela ukuvuselela ikhonsoli yabo. Nokho, lapho sikhuluma izinhlelo ezikhethekile zangempela, njengoba kunjalo ngale ndaba esikhuluma ngayo, baningi abasebenzisi abenza konke okusemandleni ukuyithola.
Kuwo wonke amamodeli we-PlayStation akhululwe ngabakwaSony kusukela kumodeli yokuqala (kufaka phakathi i-PSP neVita), inkampani yaseJapan ibeke amakhonsoli ayizigidi ezingama-526 emakethe, isatshalaliswe ngale ndlela elandelayo:
Isigidi esingu-120 kusuka ku-PlayStation yasekuqaleni.
Izigidi eziyi-150 ezivela ku-PlayStation 2
PSP ayizigidi ezingama-76
Izigidi eziyi-80 ezivela ku-PlayStation 3
15 million oqhamuke kwi-PlayStation Vita
85 million kusuka ku-PlayStarion 4
Ngokusho kukaMongameli we-Sony kanye ne-CEO uJohn Kodera ku bonga abasebenzisi ngokuthembela abakubeke ebangeni le-PlayStation, balungiselele uhlelo olukhethekile lwe-PlayStation 4, ikhonsoli lapho kuzothengiswa amayunithi angama-5.000 XNUMX kuphela, onke anebheji elihlanganisa inombolo yeyunithi ehambisanayo.
Intengo yale khonsoli izoba ngama-euro angama-499, futhi izofaka epakethe irimothi, ikhamera nokusekelwa okuqondile. Ubungako bezinhlamvu buzoba luhlaza okwesibhakabhaka oguqukayo. Kepha uma sifuna ukuthola uhlelo olukhethekile oluphelele, kuzofanele sikhokhe ama-euro angama-89 ngamahedfoni we-bluetooth. Leli phakethe lizoqala ukudayiswa ngo-Agasti 24 olandelayo futhi mhlawumbe lizothengiswa ngokushesha, ngakho-ke uma sifuna ukulibamba, ngaphandle kokuya ku-eBay bese sikhokha imali ethe xaxa, kuzofanele silwazi lolo suku.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Amakhonsoli » I-Sony Releases Limited Edition Translucent PS4 Yokugubha I-PlayStation Edayiswayo Engu-500 Million
IXiaomi Redmi 6 neRedmi 6A zifika ngokusemthethweni eSpain zisuka ku- € 119
Lapho isikhathi sifika, namanje asazi ukuthi singasishayisa kanjani i-International Space Station